Munamato wekuparadzanisa vanhu vaviri? [Kuparadzanisa kwekupedzisira]
Munamato wekuparadzanisa vanhu vaviri San Alejo Rapido inoshanda mune iyo mamiriro ezvinhu umo mhuri yedu, kugadzikana kwedu kwemanzwiro uye kwekushushikana kana kugara zvakanaka kwevana vedu kana mudiwa kwakakanganiswa.
Semuenzaniso, mune imwe nyaya iyo mumwe wedu ari kutsvaga mabasa atinofunga kuti haabatsire, asi panzvimbo peizvozvo achamukuvadza, ipapo mutsara uyu unoshanda.
Mune zviitiko zvinoshandiswa zvakanyanya, ndeyokuparadzanisa watakamboroora naye kubva iye zvino mukwikwidzi iye anotarisira kudzoreredza hukama hwatakanga nahwo kana kudzivirira mumwe wedu kuti atisiye isu tiwane mumwe munhu.
1 Munamato wekuparadzanisa vanhu vaviri uchitsanya unoshanda here?
1.1 Munamato kuna San Alejo kupatsanura vanhu vaviri zvechokwadi
1.2 Munamato wekuparadzanisa vadi zvechokwadi
1.3 Namata kuti vanhu vaviri varwe uye kuvengana
1.4 Wokupedzisira Mugove Wemunamato
2 Ndingagone kunamatira munamato wekuparadzanisa vanhu vaviri kune chero ani?
Munamato wekuparadzanisa vanhu vaviri uchitsanya unoshanda here?
Rudo chinhu chakaomarara.
Kana rudo pakati pevanhu vaviri urwu rwusiri rwechokwadi, munamato unoshanda.
Chero rudo rusina simba, pasina kunzwa kana shungu runopunzika nyore kuburikidza neizvi minamato.
Vanopedzisira vaine kusagadzikana, nepfungwa dzerudo uye nehukama hwese pakati pevanhu vaviri ava.
Varoorani chete vane rudo rwekufanorongerwa ndivo vanozopona navo.
Zvikasadaro, iwe uchakwanisa kuparadzanisa vanoda, vakomana uye vakaroora mumazuva mashoma emunamato.
Munamato kuna San Alejo kupatsanura vanhu vaviri zvechokwadi
Iwe une dura rekuparadzanisa.
Zvese infernal zvinotenderedza vasanangurwa vaIshe, ndinokukumbira kuti ubvise (Munhu wekutanga anonzi) kubva (Iri rinotevera zita rinotaurwa) Kubviswa, St. Alejo, kuenda (Iro zita rinodzokororwa).
Nezve ndima yake nehupenyu hwake Kuti asatitende zvakawedzera kukuvara. Ini ndinokubvunza iwe, San Alejo, kuti pamwe neni ndinokwanisa kusvika hupenyu hwake.
Kuti ivo havagone kubatana pamwe, Kuti vasasvikira pakuva pamwechete, Kana patafura yepikicha, Kana pachigaro chekuzorora, Kana mumba yekutandarira,
Kuti havagone kunamatirwa pakuvimba. San Alejo, vagadzei zvinonzwisisika.
Anogumburwa San Alejo, sewakasimukira akakomborera ndinokumbira kuti mundipe chikumbiro changu nekukurumidza sezvazvinogona, Uye kuti mumwe wangu adzoke izvozvi Kuti auye kumba nemhuri yake.
Ndinokutendai nekundinzwa, muenzaniso San Alejo, uye ndinopa izwi rangu kuparadzira munamato wako kana iwe ukandibvumira kudzokorora mhuri yedu.
Dai mweya wandinokumbira kuti upatsane Usadzoke kuzomuka muhupenyu hwangu Amen.
Pane zviitiko zvatisingakwanise kuona vanhu vaviri pamwechete, nekuda kwechikonzero uye tinoda kuti vaparadzane, kuzadzisa izvi zvakachengeteka uye zvinobudirira hapana chinhu chiri nani kupfuura munamato kuna San Alejo.
Mutsara uyu unofanirwa kunge uine zita revanhu vaviri iro ratiri kuda kuparadzaniswa sezvo uchifanira kuti utaure nepakati pechirevo.
Ndiwo munamato wakanyatsorehwa uyo vanhu vaviri vari pamubvunzo vasingabvumidzwe, usashuve kugovera imwe nguva mukambani yemumwe, kuvhiringidzwa nekuvapo kwevaviri vacho, saka havana shungu yekusangana zvakare uye kubva pane imwe nguva kuenda kune inotevera, vanozvisema ivo pachavo kusvika pakuzosvika pakuparadzaniswa.
Munamato uyu une simba kwazvo.Naizvozvo, hazvina kuitirwa kupatsanura vaviri ava kwenguva yakati, asi kuti kupatsanuka kuri kwekupedzisira.
Munamato wekuparadzanisa vadi zvechokwadi
Ah, Santa Muerte ndauya kwauri kuzokuteterera kuti undibatsire, ini ndanyadziswa muhupenyu, ndakapa makore angu akanaka kumurume wandinoda wakaparadzaniswa neni kuti abve nemumwe mukadzi anoranga mukadzi iyeye ari kundirwadzisa, Anoda kuparadza muchato wangu kure ne (zita remunhu iyeye) kuti adzokere kwandiri nekusingaperi.
Santa Muerte, gadzira (zita remunhu iyeye) wotanga kumuvenga uye usamuvimba, ziva kuti vari kumushandisa, zvese zvaari kuda imari yake uye kunakidzwa kuri naye mukufarira, ndinokumbira kuti muparadzanise mudiwa wangu kubva pane zvese chii chinomuparadzanisa kubva kwandiri ini misodzi inoyerera ini nekuda kwechimwe, ivo vanova vakaomeserwa kutambudzika kwake.
Ah, White Girl shandisa masimba ako kuti ubvise mumwe mukadzi mumutambo, Santa Muerte ndinokukumbira kuti uunze (zita remunhu iyeye) panguva ino kumberi kwangu undidzosere nyoro segwayana diki, kanganwa zita rekuti mumwe mukadzi anondiitira dessert pamakumbo angu ndokumbira ruregerero.
Ah, Santa Muerte gadzira izvo (zita romunhu iyeye) usadzivise zvido zvangu ita mupfungwa dzako chimbofunga zvekare nezvangu uchikumbira tsitsi, ndine urombo uchindinyengerera nerudo kuti tigone kufara zvakare sepakutanga usandisiye ndoga Santa Muerte .
Vanoda Ivo vanozivikanwa kuve wechitatu munhu anopindira muhukama hwakagadzikana uye ivo idambudziko rinotyisa rinofanirwa kugadziriswa nenjere.
Imwe yenzira idzo ndeyokuita munamato wakasarudzika uyo chinangwa chakakwanisika chingaitwe pasina kusangana mukukonana.
Munamato uyu wekuparadzanisa vanhu vaviri (vadikani) wakunda yakawanda yekuzvipira nekuda kwekushanda kwayo.
Paunenge uchinge uine pfungwa dzakajeka, enderera kunamatira, zvinogona kuitwa chero nguva, zvisinei kuti uripi, zvinokurudzirwa ndezvekuti zviitwe nekuvimbika kukuru uye, sekuse mumamiriro ezvinhu eminamato, uine kutenda kukuru.
Namata kuti vanhu vaviri varwe uye kuvengana
Saint Cyprian, iwe une simba kupfuura vese vane simba, ndapota ini ndinoda rubatsiro rwako, rudo rwako, isu tiri vaviri takagadzirwa kuti tigare padhuze nepadhuze, ndinokukumbira kuti utendere kubva kure 1 kusvika ku2, ndinoda masimba ako kushandiswa kuparadzanisa vanhu vaviri ava.
Usade kuona, gara zvakanaka usiyane neumwe. Ndinoziva kuti unokwanisa kudzora rudo uye ziva kuti kune vanhu vasina kuberekwa kuti vagare vese sevamwe, vane chokwadi chekuti havafanirwe kunge vari pamwechete, ndinopika.
Oh ane simba Musati weSyprian, ndimi vemasimba emasimba, ini ndinokumbira kuti mushandise simba renyu, kuti vanhu ava vaparadzane, ivo havagone kuenderera pamwe, ivo havachatamburazve, ndinoziva kuti vanofanirwa kuparadzaniswa, vaviri ava havasi muenzaniso wemufaro.
Ini ndinonamata munamato uyu kupatsanura vanhu vasina kufara, ndoziva kuti anogona kufara neni, neniwo ndoziva kuti munamato uyu uchashanda nemazvo, ngazvive zvakadaro.
Isu hatibheti kuvenga, isu tiri vanhu vane rugare vanotenda muhurukuro nguva dzese senzira yekugadzirisa matambudziko zvisinei nekuti ndiani
Zvino, mupfungwa iyi, aya mitsara anoitwa aine chinangwa che gadzira kuvengana mune izvo zviitiko apo masimba asina kunaka anoyerera Kusvibisa munhu akanaka.
Isu isimba saka ndosaka tichifanira kugara tichitarisira avo vakatipota uye nekusvibisa nharaunda yekwedu.
Kana munamato uyu wekuti vanhu vaviri varwe nekuvengana isu tinozviita mukushamwaridzana nenhengo yemhuri zviri nani, sezvo masimba akanaka anotora simba rakawanda kumba achikwezva mhinduro yemunamato wedu.
Wokupedzisira Mugove Wemunamato
Ndinopa mazwi aya kuvanhu ...
Kuti izvozvi vari kutenderedza pfungwa dzangu, zvekuti, pandinongopedza, pane kungogumbana uye havagone kugara pamwe zvakare.
Dai kurwira kuve chikamu chehupenyu hwavo kubva zvino uye, Kana iyo nguva yekusvika yasvika, paradzanisa kuti usazomboungana.
Kuti izvo zvavanogadzira ushamwari nhasi hazvisi chinhu chinopfuura chipoko mukuvanzika Uye kuti nzira yavo inoenda Mukutarisana mune ramangwana Kuti varege kusangana zvakare.
Rega vazvinyure izvi mukati kana zvakadzika kweMweya yavo uye vawane zvandinokumbira kuburikidza nekutenda.
Mune ino nyaya isu hatisi kukumbira kuvengana kana kwechinguva chidimbu kuzorora.
Mutsara uyu chaiwo isu tinofanirwa kuwana a kupatsanurwa chaiko.
Inogona kushandiswa muzvinhu zvakawanda mune zvehukama uye mune zvehushamwari hwakachena uye hwechokwadi.
Kune vanhu avo, kunyangwe vanopa fungidziro yekuti vane vavariro dzakanaka, vanogara vachiuya navo gomo remasimba akashata kana zvakavanzika vavariro dzisina kunaka zvachose.
Muminamato iyi munamato unova yedu chete uye inobudirira nzira yekubuda.
Ndingagone kunamatira munamato wekuparadzanisa vanhu vaviri kune chero ani?
Unogona kunyengetera kuna chero munhu zvisina magumo.
Asi ingoshandisa munamato pazvinenge zvichikosha chaizvo. Usaedze kupatsanura vakaroorana pasina vavariro nazvo.
Tsika idzi dzakasimba kwazvo uye hadzifanirwe kushandiswa chero nechinangwa.
Chete shandisa munamato wekuparadzanisa vanhu vaviri zvakajeka uye nekukurumidza kupatsanurana kuparadzaniswa mune zvekushaiwa chaiko.